Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247988 times)
« Reply #710 on: January 21, 2012, 09:59:18 AM »
" ညံ့ လိုက် တဲ့ ယော င်္ကျား "
မော်စကိုမြို့ ရှိ ဗဟို လူမှုဖူလုံရေးရုံးသို့ပင်စင်ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လူကြီးတစ်ယောက်
ရောက်လာသည် ။ မိမိ အလှည့်ရောက်၍ အခန်းထဲသို့ဝင်သွားသောအခါ သားသားနားနား ၀တ်စားထား
ပြီး သဘောကောင်းပုံရသည့် အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးအရာရှိ ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။
လာရင်းကိစ္စကို သူမအားပြောပြသည့်အခါ အရာရှိအမျိုးသမီးသည် လိုအပ်သည်များကို အလျှင်အ
မြန်ပင်ဆောင်ရွက်ပေးသည် ။ ပုံစံစာရွက်များကို ဖြည့်ခိုင်းသည် ။ ဖြစ်ချင်တော့ လူကြီးသည်အဓိကဖြစ်သည့်
မိမိ၏ မွေးသက္ကရာဇ်အထောက်အထားပါရှိသော မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကို မေ့လာသည် ။ အမျိုးသမီးက စာ
နာပြုံးပြုံးပြီး လူကြီးအား ရှပ်အကျီ င်္ချွတ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ လူကြီး ချွတ်ပြသည် ။
" ဦးရဲ့ရင်ဘတ်မွှေးတွေ ဖြူနေတာကို ကြည့်ရုံနဲ့ ဘဲ ဦးဟာ အသက် ( ၆၀ ) ပြည့်နေပြီဆိုတာ ပေါ်လွင်
ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် မပါဘဲနဲ့ လဲ သက်ပြည့်ပင်စင် လက်မှတ်ကို ကျမ ထုတ်ပေး
ကျေးဇူးတင် စကားပြောပြီး လူကြီး အိမ်သို့ ပြန်လာသည် ။ အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် ရုံးခန်းထဲက အဖြစ်
အပျက်ကို မိန်းမအား ပြောပြသည် ။ မိန်းမက မကျေမနပ်ပြောသည် ။
" ရှင်...အင်မတန် ညံ့တဲ့သူ...။ အင်္ကျီအပြင် တစ်ကိုယ်လုံး ချွတ်ပြလိုက်ပါလား...အဲ့ဒါဆို မသန်မစွမ်း
ဒုက္ခိတ ပင်စင် ရမှာပေါ့ရှင့် "
( မှတ်ချက် ။ ရုရှားနိုင်ငံတွင် မသန်မစွမ်း ဒုက္ခိတပင်စင်သည် သက်ပြည့်ပင်စင်ထက် ပိုက်ဆံပိုရသည် ။ )
« Reply #711 on: January 24, 2012, 10:34:40 AM »
" သောက် လိုက် ပါ ဦး "
ဆိုဗီယက် ၀န်ကြီးများအဖွဲ့ ကို စတာလင် က ညစာဖြင့် တည့်ခင်းဧည့်ခံသည် ။ စတာလင် သည် ဧည့်သည်
များကို စားကောင်းသောက်ကောင်းတို့ ဖြင့် ရံဖန်ရံခါ ဧည့်ခံတတ်သူ ဟု နာမည်ကြီးသည် ။ စတာလင် က အရက်
ခွက်ကို မြှောက်ပြီး ပြောသည် ။
" ကျနော် " တို့ စ် " လုပ်ချင်ပါတယ်...။ ကျနော်တို့ ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း သွေးသောက်ရဲဘော် ကွယ်လွန်သူ
" ယာဂိုဒါ " ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် သောက်လိုက်ကြရအောင်ပါ "
ယာဂိုဒါ နေရာမှ ထပြီးပြောသည် ။
" ရဲဘော်..စတာလင် ...၊ ကျနော် မသေသေးပါဘူးခင်ဗျ "
စတာလင် လေအေးလေးနှင့် ပြန်ပြောသည် ။
" ခင်ဗျား အရက်ခွက်ကို မသောက်ရသေးဘူးလေ... "
« Reply #712 on: January 30, 2012, 01:42:41 PM »
" ဈေး ပေါ တာ ပေး "
စိန်ရွှေရတနာဆိုင်အတွင်းသို့လူတစ်ယောက်ဝင်လာသည် ။ အိတ်ထောင်ထဲမှ ခြောက်လုံးပြူးကို အရောင်းစာရေး
မြင်သာရုံပြပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောသည် ။
" ကျနော်..မကြာခင် လက်ထပ်ဘို့ ရှိတယ်..။ အဲ့ဒါ ကျနော့်ရဲ့ဇနီးလောင်းအတွက် ခပ်ညံ့ညံ့ကျောက်တွေနဲ့ 
လုပ်ထားတဲ့ နားကပ်ဖြစ်ဖြစ်..လက်စွပ်ဖြစ်ဖြစ် ရွေးပေးစမ်းပါ...။ ခပ်မြန်မြန်လေး လုပ်စမ်းပါ.. "
အရောင်းစာရေးသည် တုန်တုန်ယင်ယင်နှင့် ကောင်တာအတွင်းပြထားသည့် အထဲက ဈေးအကြီးဆုံး စိန်နားကပ်တစ်
ရံကို ထုတ်ပေးလိုက်သည် ။ နားကပ်ကို ကြည့်ပြီး. လူဆိုးက စိတ်တိုတိုနှင့် စာရေးကို ပြောသည် ။
" ဟေ့.လူ...ခင်ဗျား ခေါင်းမှ ကောင်းရဲ့ လား...။ စိန်အစစ်ကြီး ဘာလို့ ပေးတာလဲ..။ ကျုပ် ၀ယ်လာတယ်ဆိုတာကို
ကျုပ်မိန်းမက လုံးဝယုံမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ..။ ဈေးပေါပေါ တစ်ခုကိုသာပေး.... "
« Reply #713 on: January 30, 2012, 01:54:34 PM »
" ဆု တောင်း စ ကား များ "
* ရှေးရှေးတုန်းက နဂါးတစ်ကောင် ရှိခဲ့တယ်..။ အဲ့ဒီ နဂါးဟာ အပျိုစင်ကိုပဲ အာဟာရအဖြစ် သုံးဆောင်သတဲ့ဗျား...
အဲ့ဒီ နဂါး ကျုပ်တို့ ဆီရောက်လာပြီး အစာငတ်သေပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ကြရအောင်....။
* သူငယ်ချင်း...မိန်းမတွေနောက်ကို ထွက်သွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားနောက် လိုက်သလို လိုက်မနေနဲ့ .. နောက်တစ်ကား
လာဦးမှာပဲဆိုတာ ..အမြဲတမ်း အမှတ်ရပါ...
ဘတ်စ်ကားတွေ မကြာခဏလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပြီး သောက်လိုက်ကြရအောင်....။
* အမျိုးသမီးက ဆရာဝန်ကို မေးတယ်..
ဒေါက်တာ..ကျမကို ဘာမှ လျှို့ ဝှက်မထားပါနဲ့ ရှင်... ကျမကို အမှန်အတိုင်းသာ ပြောစမ်းပါ...
အခုလို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီး လက်နှစ်ဘက်စလုံး ကျိုးသွာတဲ့နောက်မှာ..ကျမယောင်္ကျားဟာ..
ကိုင်း..မိန်းမတွေရဲ့ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားအတွက် သောက်လိုက်ကြရအောင်....
« Reply #714 on: February 01, 2012, 10:16:51 AM »
" မြည်း မို့လို့"
တရားဟောဆရာက အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများကို ပြောနေသည် ။
" လူဟာ တိရစ္ဆာန်ထက် အသိဉာဏ် ပိုတယ်လို့ ဆိုကြတယ်...။ ဒါပေမဲ့ အရက်သောက်လိုက်တာနဲ့ 
လူဟာ တိရစ္ဆာန်ထက် နိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်...။ ဒါကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားစေ ချင်တယ်.
ဆိုကြပါစို့ .. မြည်းတစ်ကောင်ရှေ့ မှာ ပုံးနှစ်ပုံး ချပေးလိုက်မယ်..။ တစ်ပုံမှာ ရေ..။ နောက်တစ်ပုံးမှာ
အရက်...။ ဘယ်ပုံးကို မြည်းသောက်မယ် ထင်လဲ.. "
နားထောင်နေသည့် တရားနာ ပရိတ်သတ်က " ရေပုံးကိုပါ " ဟု သံပြိုင်ဖြေလိုက်ကြသည် ။
" မှန်တာပေါ့....ဘာဖြစ်လို့ လို့..ခင်ဗျားတို့ထင်ကြသလဲဗျ.. " တရားဟောဆရာက ထပ်မေး ပြန်သည် ။
အားလုံးက ပြန်ဖြေကြသည် ..။
" မြည်း ဖြစ်နေလို့ ပေါ့ဗျ.. "
« Reply #715 on: February 01, 2012, 10:47:00 AM »
" ဖတ် လိုက် ရ သည် ကြား လိုက် ရ သည် "
" ကျမ၏ အားနည်းချက်ကို ကျမ သိသည် ။ ထို့ ကြောင့် ယောင်္ကျားတွေနှင့် လက်လှမ်း
မီသောနေရာတွင် မနေမိအောင် ကျမ ကြိုးစားပါသည် ။ " ( အယ်ဒီတာထံ ပေးစာမှ )
" သူ ရယ်တာက ပါးစပ်နဲ့ဆဲရေး တိုင်းထွာတာထက် နာတယ်. " ( တိုင်ကြားစာမှ )
" နောက်ပြောင်ချင်သည့် စိတ်ဖြင့် ဧပြီလ ( ၁ ) ရက်နေ့ က အလုပ်မဆင်းခဲ့ပါ..။ သို့ သော်
ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဌေးသည် ဟာသကကို နားမလည်သဖြင့် ထိုနေ့ ကို လစာမဲ့အဖြစ် သတ်
မှတ်ခဲ့ပါသည် ။ " ( အယ်ဒီတာထံပေးစာမှ )
" ကျေးဇူးပြု၍ တိရစ္ဆာန်များကို အစာမကျွေးပါနှင့်...။ စားစရာ ကောင်းကောင်းပါလာသည်
ဆိုပါက အစောင့် ၀န်ထမ်းကို ပေးလိုက်ပါ ။ " ( တိရစ္ဆာန်ရုံမှ ဆိုင်းဘုတ်..)
« Reply #716 on: February 07, 2012, 12:31:51 PM »
" ဖတ် လိုက် ရ သည် ကြား လိုက် ရ သည် - ၂ "
" ရောဘတ်တို ကားလို့ စ် ( ရီးရဲ မက်ဒရစ်အသင်းမှ အလယ်တန်းလူ ) ပြစ်ဒဏ်ဘော ကန်တဲ့အခါမှာ
သားသမီး မရှိသေးတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေ သူ့ ရှေ့ မှာ မရပ်ကြပါနဲ့ လို့အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်...
( ဘောလုံးပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်မှ.. ) "
" ကျနော့်အတွက်အပြင် အစာအိမ်ရောဂါရှိနေသော ကိုဘမောင်အတွက်ပါ သောက်လိုက်မိရာ သူများထက်
ကျနော် အရင် စောမူးပြီး နောက်ပိုင်း ဘာလုပ်မိမှန်း မသိတော့ပါ...။ ( ဖြေရှင်းချက်မှ ) "
" ဆိုင်တစ်ခုလုံး သန့် ရှင်းနေသည် ။ အထားအသို စနစ်ကျသည် ။ လိုချင်တာ အကုန်ရှိသည် ။ ဈေးရောင်းသူ
များကလည်း သန့် သန့် ပြန့် ပြန့်ရှိသည် ။ ပြုံးချိုနေသည် ။ သူတို့ ကိုလည်း ၀ယ်ပါဟု ဖိတ်ခေါ်နေသ
ယောင်ယောင်... ( ၀ယ်သူတို့ ၏ ထင်မြင်ချက် စာအုပ်မှ ) "
« Reply #717 on: February 07, 2012, 12:51:51 PM »
" ဖတ် လိုက် ရ သည် ကြား လိုက် ရ သည် - ၃ "
" သူနှင့် ကျမအကြား ဘာမှ မဖြစ်နိုင်တော့ဟူသော ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ကျမ သူ့ ဆီ လာခဲ့ပါသည် ။ သို့ သော်
ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ က ဤသို့မယူဆကြောင်း ခံစားမိပါသည် ။ ( အယ်ဒီတာထံ ပေးစာမှ ) "
" ကျနော်သည် ငယ်ငယ်ကတည်းက ရိုင်းပြစော်ကားခြင်းကို နှစ်သက်သူ မဟုတ်ပါ..။ ထို့ ကြောင့် အီဗန်နော့ က
ရုံ့ ရင်းကြမ်းတမ်းသော စကားလုံးများဖြင့် ကျနော့်အား ဆဲရေးတိုင်းထွာရန် ပြင်နေသည်ဟု ခံစားမိသည်နှင့်တစ်
ပြိုင်နက် ၄င်း၏ ရှေ့ သွား နှစ်ချောင်းကျိုးအောင် ကြိုတင်ထိုးကြိတ်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ ( ဖြေရှင်းချက်မှ ) "
" ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ကျမကို ပစ်သွားသောအခါ သူ့ ကို သစ္စာဖောက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည် ။ ( အယ်ဒီတာထံ
ပေးစာမှ ) "
« Reply #718 on: February 13, 2012, 10:29:28 AM »
" တစ် ကောင် ကြွက် "
ဂျော်ဂျီယာသားတစ်ယောက် မော်စကိုသို့ ရောက်လာသည် ။ ရင်ပြင်နီ ရှိ ဗိမာန်တွင် လီနင် နှင့် စတာလင် တို့ 
မှန်ပေါင်းချောင်ထဲ မည်သို့လဲလျောင်း နေသနည်းဆိုသည်ကို သွားကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ ( စတာလင်သည်
ဂျော်ဂျီယာနယ်သားဖြစ်သည် ။ )
ဆေးစီရင်ထားသော လီနင်၏ ရုပ်ကလပ်ကိုသာ တွေ့ ရပြီး တစ်နယ်တည်းသား စတာလင်၏ ရုပ်ကလပ်ကို မမြင်ရ
သောအခါ ဗိမာန်၏ ၀န်ထမ်းကို မေးသည် ။
" ခေါင်းဆောင်ကြီး လီနင်ရဲ့ ဘေးမှာ စတာလင်ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကို ထားတယ်လို့ကျနော် သိထားတယ်...အခုဘယ်မှာလဲ "
ရုပ်ကလပ်ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဟု ပြောရမှာ အားနာသည်နှင့် ၀န်ထမ်းက ဤသို့ ဖြေသည် ။
" သူ့ ကို မြေမြုတ်သင်္ဂြိုလ် လိုက်ပါပြီ "
ဤစကားကိုကြားသောအခါ ဂျော်ဂျီယာသားက မကျေမနပ်ဖြင့် လီနင်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ပြောသည် ။
" ဘာလဲ....ဒီလူကျတော့ ဆွေမျိုး မရှိလို့ လား... "
« Reply #719 on: February 13, 2012, 10:51:54 AM »
၂၀ ကြိမ်မြောက် ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ် ပါတီညီလာခံ အပြီးတွင် ကရူးရှက် သည် စတာလင် ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို
ဗိမာန်မှ ဖယ်ရှားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ စတာလင်၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ယူမည့် နိုင်ငံ ရှိ မရှိ လိုက်လံ စုံစမ်းသည် ။
မည်သည့် နိုင်ငံကမှလက်မခံပေ ။ အစ္စရေးနိုင်ငံကို နောက်ဆုံးထား၍ မေးမြန်းသောအခါလက်ခံယူမည်ဟု ဖြေသည် ။
ဤအကြောင်းကို ကရူးရှက်အား အစီရင်ခံရာ ကရူးရှက် က ခါးခါးသီးသီး ငြင်းသည် ။
" မဖြစ်ဘူး...အစ္စရေးကိုပေးလို့ မဖြစ်ဘူး...၊ အဲ့ဒီမှာ စတာလင် ပြန်အသက်ရှင်လာရင် ဒုက္ခ. "
" ခါး ပိုက် နှိုက် "
အမေရိကန်သမ္မတ ကနေဒီ နှင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် ကရူးရှက် ဗီယင်နာမြို့ မှ ပြန်လာသည် ။
အပြန်ခရီးတွင် ၄င်း၏ သက်တော်စောင့်က ပြောသည် ။
" အမေရိကန် သမ္မတ ကတော်ရဲ့ဘယက်ကို သတိထားမိလား...စိန်အစစ်တွေဗျ.. "
" ဟုတ်လား...ငါ့ကို ပြစမ်း... "